सरकारको कामभन्दा गफ धेरै, जुन जाेगी अाए पनि कान चिरिएका ! « Online Tv Nepal
सरकारको कामभन्दा गफ धेरै, जुन जाेगी अाए पनि कान चिरिएका !
Published : 20 June, 2018 9:44 am
काठमाडाैँ – दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएपछि नागरिकहरुले सरकारको सोच र शैलीमा परिवर्तन आउने आशा र अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचनअघि जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर जनताले आफ्नो अभिभारा पूरा गरे ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अगाडि सारेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समृद्ध नेपालको नारालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउने नारा अगाडि सार्नु राम्रो पक्ष हो । समृद्ध देश निर्माण भएको हेर्ने चाहना कुन नेपालीलाई नहोला र ? सरकार गठन भएको चार महिना बितिसकेको छ । सरकार जनताको दैनिक समस्याको समाधान गर्नसमेत असफल भएको छ । याे खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।